Ability မှ Banking Information System သည် မြန်မာနိုင်ငံဘဏ် လုပ်ငန်း စနစ် နှင့်ကိုက်ညီအောင် ရေးဆွဲထားပြီး ငွေကုန် ကြေးကျ သင့်တော်သော အလွန်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ABSof Business Accounting System
ABSoft Business Accounting System တွင် စာရင်း Management ဆိုင်ရာModule Module လေးခုပါဝင်ပြီး Multi-user, Multi-currency, Multi-company အသုံးပြု၍ ရသဖြင့် စာရင်းကိုင် နှင့် လုပ်ငန်းရှင် အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော ကွန်ပြူတာ စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းကြီး၊ငယ် မရွေး အသုံးပြုနိုင်သော ၀န်ထမ်းရေးရာ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည့် Computerized HR Management System တစ်ခုဖြစ်ပြီး Personnel details, attendance, payroll and overtime calculation များကို စနစ်တကျ ပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် HR Manager တစ်ဦးကဲ့သို့ အလွန် အသုံးဝင်ပါသည်။
Hotel တခု၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများကို Computerized System ဖြင့် စနစ်တကျ လည်ပတ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ပြည်တွင်းဟိုတယ်များ၏ လုပ်ငန်းသဘာဝကို အခြေခံပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးဆွဲပေးထား သော Hotel Management System ဖြစ်ပါသည်။
စားသောက်ဆိုင်၏ အော်ဒါလက်ခံခြင်း ၊ငွေရှင်းခြင်း ၊ Slip ထုတ်ပေးခြင်းများနှင့် အရောင်းမှတ်တမ်း များကို ထုတ်ယူနိုင်ပြီး အ၀ယ်ပိုင်းနှင့် အထွေထွေလယ်ဂျာပိုင်း များပါ တွဲဘက်သုံးပါက ကုန်ပစ္စည်းပိုင်း , အရောင်းပိုင်းအပြင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ အရှုံး အမြတ်စာရင်း ၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း တို့ကိုပါသိရှိနိုင်ပါသည်။
ABSoft Smart Restaurant သည် Tablet Based Ordering System ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သုံးခြင်းအားဖြင့် Waiter မှ Order မှာပြီးသည်နှင့် Kitchen, Bar နှင့် Counter တွင် Order Slip ထွက်လာသည့် Remote Control System ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းရှင် သည် ၀န်ထမ်းများ၏ အချိန် နှင့် လုပ်အားကို ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်မည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ABSoft POS သည် စူပါမားကတ်၊ မီနီမားကတ်၊ စတိုး၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များအားလုံး အတွက် Voucher Slip ထုတ်ပေးပြီး အရောင်းမှတ်တမ်း တိကျစွာသိရှိနိုင်သော Bar Code Scan ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ABSoft Money Changer သည် နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်း ၊ ၀ယ် လုပ်ငန်း၏ Currency များကို ဘဏ်တစ်ခုကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းစီမံ ကွပ်ကဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အရှုံးအမြတ် ၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်သုံးနိူင်သဖြင့် ဘဏ်၏ စာရင်းဆိုင်ရာ အရာရှိများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေသကဲ့သို့ မိမိလုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ABSof Beauty-Salon System တွင် Customer History မှတ်ထားခြင်း ၊ Staff Commission တိကျ စွာ တွက်ပေးခြင်း နှင့် ပြည့်စုံသည့် Report များပါရှိသည့်အတွက် မိမိလုပ်ငန်းကိုပိုင်နိုင်စွာ Control လုပ် နိုင်မည့် ကွန်ပြူတာ စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
Ability Software Services Co.,Ltd. သည် ၁၉၉၇ မှစတင်၍ Software Development ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး MPA ၊ MBA ဘွဲ့ရများ ၊ ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်မှ Master ဘွဲ့ရများ ၊ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိ Developer များ ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ါရင့်အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်မျာ: ၊ Microsoft Certified များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာအမျိုးသားပိုင် Business and System Solution Provider Company တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၏ Total IT Solution များကို IT Provider အဖြစ် ယနေ့ထက်တိုင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပြီး လုပ်ငန်း နှင့် အကိုက်ညီဆုံး Computerized System များကို တာဝန်ယူရေးဆွဲပေးလျှက်ရှိ ပါသည်။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ကို ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် Ability Software Services Co.,Ltd. ၏ IT နှင့် စာရင်းကိုင် ပညာရှင် များပါဝင်သော အဖွဲ့ မှ စနစ်တကျလေ့လာ အကြံပြုပေးခြင်းများကို လည်း ဆောင်ရွက် ပေးနေပါသည်။
Ability Software Services Co.,Ltd. သည် ပြည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်တွင်းရှိ ဘဏ်များအတွက် Domestic Banking System နှင့် Foreign Banking System, Company လုပ်ငန်းများအတွက် Business Accounting System, POS System, Hotel Management System, Restaurant Management System, Human Resources Management System, Money Changer System, Beauty Saloon System, Mortgage System စသည့် Computerized System & Software များကို Company ပိုင်အမည်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရေးသားကာ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျှက်ရှိပါသည်။